Muri pano: musha / Technology News / Surface Laptop 4 ingangove isingaite AMD Ryzen 5000 processor, inoratidza chiratidzo
Microsoft haisati yamboda kwazvo kuisa maprosesa azvino mumidziyo yavo, uye zvinoita kunge AMD-powered Surface Laptop 4 ichave mumwe muenzaniso.
A bhenji yechigadzirwa tweeted na APISAK inoratidza chishandiso chiri kupihwa simba neiyo AMD Ryzen 7 processor iyo ikozvino yave yenyaya.
Vamwe vanga vachitarisira iyo ichangoburwa AMD Ryzen 5000 processor, iyo yakaburitswa mwedzi mishoma yapfuura.
Iyo bhenji inoratidza iyo Surface Laptop 4 inogoneswa neiyo 8C / 16T Ryzen 7 processor ine wachi yepasi ye2 GHz uye inokwidziridzwa ye3.7 GHz yakavezwa neRadeon RX Vega 8 GPU uye 16 GB mbiri-chiteshi LPDD4-4266 RAM.
Nhau idzi dzinoodza moyo, asi zvinogona kunge iri rinozove repasi-rekupedzisira vhezheni yechigadzirwa, uye pachave neshanduro dzine ichangoburwa processor, kana kuti iyo bhenji haina kunyatso kuratidza processor.
Ehezve, Microsoft ichave zvakare ichisunungura Intel Tiger Lake-powered Surface Laptop 4 kune avo vanoomerera pakuve neazvino mukurusa mune yavo kifaa.
Microsoft Surface Laptop Endai ongororo: Split hunhu
AMD's Mobile Revival: Kutsanangudza zvakare Notebook Bhizinesi neiyo Ryzen 9 4900HS (Ongororo)